Progressive Voice Myanmar » Global Witness response to suspension of Myanmar from EITI in wake of military coup
Global Witness response to suspension of Myanmar from EITI in wake of military coup
February 18th, 2021 • Author: Global Witness •2minute read
Today, the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) suspended Myanmar in response to the February 1st coup d’état by Myanmar’s military. Myanmar had beenamember of the EITI, the global standard for transparency and accountability in the oil, gas and mining industries, since 2014.
The EITI Board issuedastatement finding that in light of the present political instability, including the lack of fundamental freedoms, and in accordance with the civil society requirements of the EITI Standard, it is not possible for the EITI to continue in Myanmar.
The action follows calls from Myanmar civil society to immediately suspend the country from the EITI and for the EITI to uphold democratic principles, heed the voices of Myanmar’s people, and refuse to legitimize the military junta as Myanmar’s governing body.
“Myanmar’s EITI membership helped to start moving the needle on corporate transparency in Myanmar’s corrupt natural resource sector, which the military is heavily involved in and which helps fund their operations. However, the military takeover and escalating crackdown on civil society has made it impossible for EITI to continue under the current circumstances,” said Paul Donowitz, Campaign Leader on Natural Resource Governance and Anti-Corruption Norms.
Commenting on today’s decision, Global Witness co-founder and EITI board member Simon Taylor said:
“Today’s EITI suspension sendsaclear message to Myanmar’s generals that there is no path back to participation in the EITI standard under their rule.”
“Allowing Myanmar to remain inside the EITI scheme in the wake of the coup would whitewash the military’s conduct.”
In its decision, the EITI board noted that effective civil society participation in the multi-stakeholder EITI and broader freedoms to engage in debates in matters related to extractive sector governance would beafactor in lifting the suspension. The statement concludes by noting that the Board will monitor the situation and consider if further action, including delisting Myanmar from the EITI scheme entirely is necessary.
မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် EITI အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းမှု အပေါ် Global Witness ၏သဘောထား ကြေညာချက်
မြန်မာနိုင်ငံအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ တွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ယနေ့ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) က အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အဖြစ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှစတင် ၍ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ နှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှင့် တာဝန်ခံမှု ရှိစေအောင် လုပ်ဆောင်သော EITI ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် ခဲ့ပါသည်။
EITI ၏ ဘုတ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှု၊ အခြေခံလွတ်လပ်မှု မရှိခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ လူမှုဖွဲ့စည်းပုံသည် EITI မှချမှတ်ထားသော စံနှုန်းမပြည့်မှီမှု များကြောင့် EITI အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်လက်ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူလူထုက EITI ကို မိမိတို့နိုင်ငံအားအဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံသဘောတရားများကို အားပေးထောက်ခံခြင်း၊ မြန်မာ ပြည်သူလူထု၏ တောင်းဆိုမှုများကို အလေးထားပေးခြင်း နှင့် တပ်မတော်အား မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် လက်မခံ ရှုံ့ချခြင်း များကို တောင်းဆိုပြီးနောက် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်လိုက်ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် တပ်မတော်ကပါဝင်ပြီး မသမာ မှုများအားဖြင့် ရရှိသောဝင်ငွေများကို အသုံးပြု ၍ ၎င်းတို့ ၏ စစ်ဆင်ရေးများကို ထောက်ပံ့ ခဲ့ပါသည်။ EITI ၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် သဘာဝအရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှာ ပိုမို ပွင်းလင်းမြင်သာ လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း တပ်မတော်၏ အာဏာသိမ်းမှု နှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ် ဖိနှိပ်မှုကြောင့် EITI အနေဖြင့် ဆက်လက် ပူးတွဲရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ” ဟု သဘာဝအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် Paul Donowitz ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး Global Witness ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ နှင့် EITI ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သော Simon Taylor ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို EITI မှ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည် မြန်မာပြည်ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအား ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ မြန်မာနိုင်ငံရှိနေသရွေ့ EITI နှင့် ဆက်လက်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် လမ်းကြောင်း လုံးဝမရှိကြောင်း ကို ရှင်းလင်းစွာ သတိပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။”
“ယခု စစ်အာဏာသိမ်းခြင်း အခြေအနေတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို EITI ၏ စီမံကိန်းထဲ၌ ဆက်လက်ထားရှိမည်ဆိုပါက တပ်မတော်၏ အပြုအမှုကို လျစ်လျူရှုရာရောက်ပါသည်။”
EITI ဘုတ်အဖွဲ့သည် EITI နှင့်ပတ်သက်သော ဝေဖန်ဆွေးနွေးခြင်းများတွင် ပြည်သူလူထု၏ လွတ်လပ် ထိရောက်စွာ ပါဝင်နိုင်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ မြန်မာနိုင်ငံအာ: အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ဖြေလျော့ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် EITI ဘုတ်အဖွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေကို စောင့်ကြည့် ပြီး လိုအပ်ပါက ဤအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ဆောင်မှုများအတွင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံအား အပြီးအပိုင် ထုတ်ပစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။